Webshop Mind Alive 2018 - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
घर / गृहपृष्ठ
लोकप्रियता सर्ट द्वारा औसत मूल्याङ्कन सर्ट नवीनतम अनुसार क्रमबद्ध गर्नुहोस् मूल्य द्वारा क्रमबद्ध: उच्च कम मूल्य द्वारा क्रमबद्ध: कम गर्न उच्च
मन जिन्दा Oasis प्रो CES उपकरण endorphins, serotonin, र norepinephrine neurotransmitter उत्पादन उत्तेजित गर्दछ र उपचार को लागी एक प्रभावी उपकरण हो। अनिद्रा, चिन्ता, निराशावा पुरानो दुखाइ। सीईएसले न्युरोट्रान्समिटर उत्पादन बढाउँदछ, जुन सूचना प्रसंस्करण, मेमोरी, उर्जा स्तर, र शारीरिक कल्याणको लागि आवश्यक छ।
$450 - $660 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
$575 - $645 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
Mind Alive DAVID Delight Pro एक गैर औषधि दृष्टिकोण हो बिभिन्न वेलियस चिन्ताका बारे। यो अनिद्रा, चिन्ता, तनाव, मुड, र ADHD / ADD जस्ता विकारहरूको उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र धेरै धेरै.
$525 - $595 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
$395 - $465 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
Mind Alive DAVID Delight Plus एक गैर-औषधी दृष्टिकोण हो बिभिन्न बिरुद्द कल्याणको चिन्ताका लागि। यो अनिद्रा, चिन्ता, तनाव, मुड, र ADHD / ADD जस्ता विकारहरूको उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र धेरै धेरै.
$350 - $420 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
$295 - $365 विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्
ऊर्जा किन्न, ध्यान, ब्रेन ब्राइटनर, निद्रा र मूड बूस्टर कोटिहरूमा १० सत्रहरूको साथ सस्तो उपकरण।
यदि तपाईं आफ्नो खरीदसँग १००% सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईं या त पूर्ण फिर्ताको लागि तपाईंको अर्डर फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ वा अरू केहि चीजको लागि आदानप्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ फिर्ता वा खरिद मिति देखि days० दिन सम्मको लागि आफ्नो खरिद आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। फिर्ता वा आदानप्रदान उत्पादहरू तपाइँ तिनीहरूलाई प्राप्त गरेको स्थितिमा हुनुपर्दछ र मूल बक्स र / वा प्याकेजि inमा।
यस नीतिले कसरी हामी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी को उपयोग को कवर गर्छ। हामी तपाईंको गोपनीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं र तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको रक्षा गर्न सबै उपायहरू लिनेछौं। प्राप्त कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी मात्र तपाइँको अर्डर पूरा गर्न प्रयोग हुनेछ, र आन्तरिक विश्लेषणात्मक उद्देश्यको लागि प्रयोग हुन सक्छ। हामी कसैलाई तपाईको जानकारी बेच्ने वा पुनः वितरण गर्ने छैनौं।